Semalt तपाइँको सामग्री व्यवस्थित गर्न वेब स्क्र्यापरहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ
स्क्र्यापर एक स्क्रिप्ट हो जुन साइटहरूबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। एक स्क्र्यापर उपकरणले वेबसाइटमा एक विशिष्ट क्वेरी पठाएर काम गर्दछ र HTML डाटा पार्स गर्दछ। वेब स्क्र्यापिंग एक विविधिक तरीका हो जुन वित्तीय बजार र अनलाइन मार्केटिंग उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
कसरी वेब स्क्र्यापर प्रयोग गर्ने
एक वेब स्क्रेपरले तपाईलाई कागजात भित्र चाहिने सामग्री छान्छ र हाइलाइट गर्दछ र तपाईलाई चाहिएको डेटा पढ्नयोग्य ढाँचाहरू र प्रोटोकलमा रूपान्तरण गर्दछ। वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले भिडियोहरू, उत्पाद वर्णन, पाठ, र छविहरूको रूपमा डाटा निकाल्ने काम गर्दछ।
वेब किन स्क्र्यापिंग?
के तपाईं बिना कोडिंग साइटहरूबाट डाटा निकाल्न काम गर्दै हुनुहुन्छ? वेब स्क्र्यापि जाने बाटो हो। एक वित्तीय लगानीकर्ता को बजारका रूपमा, तपाईं आफ्नो वेब स्क्रेपर डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न लाइब्रेरीहरू प्रयोग गरेर जुन तपाईंको मार्केटिंग विशिष्टताहरू अनुरूप छ।
वेब स्क्र्यापि Withको साथ, तपाईं सजिलैसँग रुबी, पीएचपी, र पाइथन जस्ता प्रोग्रामिंग भाषाहरू प्रयोग गरेर सामग्री सिन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, केहि चुनौतीहरू तपाईं र वेब स्क्र्यापिंग बीचमा खडा हुन सक्छ। यी चुनौतिहरूले वेबमास्टरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा वेब स्क्र्रापर्स प्रयोग गर्नबाट रोक्छन्। यहाँ दिमागमा राख्न केहि चुनौतीहरू छन्।
चाहे तपाईं स्टार्टर वा प्रो हुनुहुन्छ, कसरी वेब स्क्रेपर प्रयोग गर्ने बारे ट्यूटोरियल गाइड अनुसरण गर्दै एक सिफारिस हो। उदाहरण को लागी, वकालत शैली को उपयोग गर्न असफल भयो को लागी scrapers लाई तपाइँको डाटा पढ्न र पार्स गर्न गाह्रो हुन्छ।
HTML5 विकसित साइटहरू
साइटहरूको एक राम्रो संख्या एचटीएमएल are को साथ विकसित गरिएको छ, एक मुख्य कारक जसले वेब स्क्र्रापरहरूलाई यी साइटहरूबाट पठनीय डेटा निकाल्न गाह्रो बनाउँदछ किनकि तिनीहरूका सबै तत्वहरू विशिष्ट छन्।
बिभिन्न वेबसाइट लेआउट
साना साइटहरूमा कसरी वेब स्क्र्यापर प्रयोग गर्ने सुझावहरू
साइटबाट विशिष्ट डाटा प्राप्त गर्न केही मुश्किल हुन सक्छ। जब ठूलो वेबसाइटहरू स्क्र्यापिंग गर्न आउँदछ, एक साधारण वेब स्क्रेपर प्रयोग गर्न सिफारिश गरिन्छ। जे होस्, यदि तपाईं सानो साइटबाट डाटा निकाल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको स्क्र्यापर विकास गर्ने र अनुकूलन गर्ने विचार गर्नुहोस्। 100% मा आउटपुट गुण अनुकूलन र सेट गर्न को लागी याद गर्नुहोस्।
वेब स्क्र्यापर्स प्रयोग गरी कसरी डेटा निकाल्ने बारे मार्गदर्शन गर्दछ
एउटा योजना उत्पन्न गर्नुहोस् जुन HTML स्क्रिप्ट प्राप्त गर्न सक्दछ
तपाईंको DOM संरचनाको निरीक्षण गरेर डाटा समावेश नोडहरू विश्लेषण गर्नुहोस्
डाटा निकाल्न नोड-प्रोसेसरको विकास गर्नुहोस्
पठनीय ढाँचामा डाटा स collect्कलन गर्न तपाईंको प्राथमिकता जाँच गर्नुहोस्
डक प्रणाली HTML कोडको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यस कोडले इनपुटको रूपमा एक वेबसाइट URL प्राप्त गर्दछ र आउटपुटको रूपमा राम्रो-कागजात डेटा प्रदर्शित गर्दछ। डक प्रणालीले अनुकूलन प्राथमिकताहरूमा प्राथमिकतामा तपाईंको डाटालाई प्रशोधन गर्न पाठकको निर्णयमा कार्य गर्दछ। यदि प्रणालीको पाठक एक यूआरएल पढ्न असफल भयो भने, URL अर्को पाठकमा फर्वार्ड हुन्छ।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, प्रतिक्रिया प्रॉम्प्ट विकास गर्न डुप्लिकेट सामग्रीको बारेमा गुनासोहरू प्राप्त गर्न सिफारिस गरिन्छ। प्रतिक्रिया प्रोम्प्टले मार्केटरहरू र ब्लगरहरूलाई उच्च गुणवत्ता र ताजा सामग्री उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। वेबमास्टरको रूपमा, सँधै आउटपुट गुणमा प्राथमिकता दिनुहोस्।
मार्केटिंगमा, अन्तले साधनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्दछ। शब्द सुरुवातबाट, समस्याहरू र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्न विचार गर्नुहोस् जुन तपाईंको अनलाइन अभियानमा बाधा पुर्‍याउँछ। एक स्क्र्यापि system सिस्टम छनौट गर्न शुरुआतीहरूलाई अलिक कठिन हुन सक्छ। तपाईंको वेब स्क्र्यापिंग अभियानलाई खतराहरू नखोल्न दिनुहोस्। कसरी वेब स्क्रेपर प्रयोग गर्ने र उच्च-गुणवत्ता सामग्री प्राप्त गर्ने भन्ने बारे अधिक ट्यूटोरियलहरू प्राप्त गर्न अपवर्कको साथ साइन अप गर्नुहोस्।